प्राधिकरणले पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन: डा. डिजन भट्टराई (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
प्राधिकरणले पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन: डा. डिजन भट्टराई (भिडियो सहित)
काठमाडौं, मंसिर २१ गते । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले हालसम्म प्राधिकरणमा आफैँ पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्नु चुनौति रहेको बताउनु भयो । उहाँले मौसम विज्ञान विभाग (डीएचएम) बीचको सहकार्यमा आएका सूचनाहरुलाई गम्भीरताका साथ लिएर मात्रै जनतासमक्ष पूर्वसूचना दिने गरेको बताउनु भयो । भट्टराईले शीतलहर र मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्य, राहतउद्धार गर्ने कामको कार्यान्वयन गर्ने मुल जिम्मेवारी जिल्ला र स्थानीय तहलाई दिएकोले स्थानीय तहले नै सम्पूर्ण काम गर्ने बताउनु भयो । संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई एकल अधिकारको क्षेत्रमा राखेको कारण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले धेरै काम आफै गर्न सक्ने भएकोले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत रुपमा बलियो बनाउन लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रवक्ता भट्टराईले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले मागेका कुराहरु प्राधिकरणले पूरा गर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहले मागेअनुसारको राहत दिन पनि प्राधिकरण तयार रहेको बताउनु भयो । प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘आज पनि हामीले प्रारम्भिक सूचना लिने कुरा भनेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा नै हो । हाम्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफैँ पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन । हामीले मात्रै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ । हाम्रो र डीएचएमबीचको सहकार्यमा यी सूचनाहरु जरी हुन्छन् । उहाँहरुले प्रारम्भिक सूचना ल्याउनुहुन्छ र उहाँहरुसँग भेरिफाइ गरेर यसको गाम्भीर्यताको बारेमा थप बुझेपछि हामीले धेरै जनतालाई त्रसित बनाउने कुरा पनि हुँदैन । त्यसकारण उहाँहरुसँगको समन्वयमा कति सूचना जनतामा पठाउने भन्ने छलफल गरेपछि त्यहीअनुसारको सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास छ ।’